Ahoana ny fihinanana saosisy fotsy fotsy any Bavaria? | gourmet
Location: Home » fandefasana » Gourmet » Ahoana ny fihinanana saosisy fotsy fotsy any Bavaria?
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Firenena | Region • Destination • Germany • Gourmet • Vaovao
Saripikan'i Tobias Gerber, nahazoana alalana avy amin'ny Bavarian Tourism
Afaka mihinana ny hoditry ny Weisswurst na saosisy fotsy ve ianao? Inona no hanina miaraka aminy ary inona no tena dikan'ny hoe "zuzeln"?
Azonao atao ve ny mihinana ny hoditry ny Weisswurst, nadika Sausage Fotsy. Inona no hanina miaraka aminy ary inona no tena dikan'ny hoe "zuzeln"? Ny "Ahoana ny ... video" fohy miaraka amin'i Bavaria Insider Jakob Portenlänger avy ao amin'ny pub Munich "Xaver's" dia mampiseho anao ny fomba fihinanao ny "Sausage White".
Ny Biraon'ny fizahan-tany any Bavaria dia te hanomana mpizaha tany Amerikana ary namoaka torolàlana hianarana ny setroka sy ny ivelan'ny kolontsaina Bavaria.
Weisswurst, na saosisy veal, dia sakafo malaza any Bavaria. Original ihany izy io rehefa vita amin'ny veal.
Amin'ny fomba mahazatra dia mihinana alohan'ny amin'ny roa ambin'ny folo ora izy io, miaraka amin'ny pretzels, voantsinapy mamy ary labiera varimbazaha Bavarian. Na izany aza, misy fitsipika manokana momba ny fomba fihinanana Weisswurst mba hanamafisana an'io traikefa culinary io.
Ny fitsipika manan-danja dia ny tsy mihinana ny hoditra na oviana na oviana. Tokony hokapaina amin'ny antsasany ny diagonaly ary ny hena dia hokapaina avy hatrany amin'ny hoditra, toy izany koa ny antsasany.
Na ny fomba nentim-paharazana kokoa, antsoina hoe "Zuzeln" dia ny matsoboka ny saosisy ao anaty voantsinapy mamy ary mitsentsitra ny hena avy amin'ny hoditra. Mahlzeit!
Bavaria, amin'ny fomba ofisialy ny Free State of Bavaria, dia fanjakana any atsimoatsinanan'i Alemaina. Miaraka amin'ny velarantany 70,550.19 km², Bavaria no fanjakana Alemana lehibe indrindra amin'ny velaran-tany, izay eo amin'ny ampahadiminy amin'ny fitambaran'ny velarantanin'i Alemaina.
Niavaka kely tamin’ny faritra hafa tany Alemaina foana i Bavaria.
Ny fomba tsotra indrindra hahatongavana any Bavaria dia ny manidina mankany Munich na maka ny iray amin'ireo fiarandalamby Intercity hifandraisana avy any Alemaina, Aotrisy, Soisa, na Italia Avaratra.
Ny Bavarians dia mpilalao mamorona miaraka amin'ny tantara manaitra.
Naverin'izy ireo tamin'ny fomba vaovao tanteraka ny fomban-drazana sy fomba amam-panao Bavarian. Mamaka lalina ao amin'ny tanindrazany izy ireo, tsy toy ny any Alemaina. Mpanakanto, mpitendry zavamaneno, mpanao asa tanana, mpanao labiera, mpanao divay, chef, sy ny maro hafa no mandrafitra ny endrik'i Bavaria. Ohatra, ireo zazalahy avy amin'ny Snow White Gin, dia mamokatra dine amin'ny fampiasana akora madio avy amin'ny faritry ny ala Spessart, ary amin'izany fotoana izany dia mitahiry ny fomban-drazana Bavarian manokana sy tranainy izy ireo.
Nantsoin'izy ireo ny anaran'izy ireo tamin'ny anaran'ilay mpilalao angano malaza, Snow White, izay nolazaina fa nahazo aingam-panahy avy amin'ny tanàna kelin'izy ireo Lohr am Main.
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny fitsipiky ny fidirana, tsidiho azafady ny tranokalan'ny Biraon'ny Raharaham-bahiny Federaly. amin'ny eTurboNews
Vaovao bebe kokoa avy any Alemaina eTurboNews
More on: Bavaria
Niverina nivantana ny Karnavaly Md Thomas noho ny...
Afaka mitifitra amin'ny sitrapo izao ny miaramila Sri Lanka taorian'ny...
Nahoana ny ITA Airways 609 no tsy namaly fanairana?
Miitatra any UAE, Arabia Saodita, Ejipta, ary...
Nambara ny fanjakana vonjy maika ao Sri Lanka ho fanoherana...
Small Montenegro dia tanàna roa lehibe Toerana ho an'ny...
Sambo lehibe tsy vita ny Genting Hong Kong...
Sidina tsy an-kiato vaovao avy any Seattle mankany Tahiti
Jamaica Tourism Hero dia iray amin'ireo kisary eran-tany vaovao 50...